Robot Tay - Dinika forum.serasera.org
Fitohizan'ny hafatra : Robot Tay
rhaj0 - 04/04/2016 20:34
Raha ny fahazoako azy izany, dia ilay "robot", dia hotry ny "olona virtuel", ka rahefa ampiresahina (eo @ tranokalabe eo), dia
- mandray resaka/teny/fehezan-teny, ary dia toa ny "mianatra" mihintsy izy avy @ izay.. sahala @ zazakely sesefana resaka, dia farany dia afaky ny mieritreritra @ tenany koa;
- ary dia mamaly resaka ny niafaran'ilay robot.
Izay izany ilay ventesin'ny mpahalala azy ny @ hoe "intelligence artificielle"
Fa navela notaizain'izay mpiserasera mpandalo eo @ tranokalabe ity robot, fa dia lasa ... "ratsy taiza", ary dia io lasa "miteniteny foana" io.
hi hi hi.. fa ny anarana namena azy kosa ange dia toa ny efa mampitsinjo ny hiafarany eee
rhaj0 - 04/04/2016 20:42
Toa 1 andro fotsiny hono i Tay no niseho masoandro, fa tena kinga ireo nampa-"ratsy taiza" azy nampianatra azy ny tsy fampianatra..
rhaj0 - 04/04/2016 20:49
Fa mbola "robot" ihany hono ny "robot", fa tsy mba fetsy tahaka ny olona. Ka hoe, mety mandresy izy @ lalao echecs, na lalao go, fa raha mi-bluff @ poker, dia mbola ambakain'ny olona fatsora ee ..
hery - 05/04/2016 07:40
Toa nandresy le ordi tam'le lalao iny an.
Fa iny resa-Tay iny milaza hoe mahavita zavatra mihoatra sy tsy voafehy ny robot fa soa ihany mbola azon'ny olona tapahina sy ajanona izy
rhaj0 - 05/04/2016 13:09
Rahefa milalao echecs ohatra, raha ny fahazoako azy, dia kinga be ny ordi manao simulation hoe, raha mankatsy ny atsia, dia mankaroa ny aria. Ny fahazoako an'io, dia mbola i Raolona no mi-programmer ilay mankatsy-mankaroa.
Izay mba takatakatro ihany. Fa ny mampivanaka ahy dia hain-dRateknolozia koa izany izao ny hoe, toatoa ny ahoana ny mecanisme-n'ny "ny mianatra":
- Ka rahefa miseho ny données maromaro, dia ilay robot ihany no mandrafitra/mamorona vali-teny na vali-ketsika "mekanika" na "aotomatika" @ izay eo.
- Fa tsy hoe, ianao no mi-programmer ity valin-ketsika ity.
Ohatra izao i Ra-Tay, dia izy ihany no lasa "nahay" miteniteny foana toa io. I Ra-Tay ihany no nandrafitra/namorona ny vali-teny automatique. Na hoe, ilay automatisation-n'ilay vali-teny, dia TSY Raolona no ni-programmer azy, fa i Ra-Tay.
Izay no fahazoako ilay hoe AI (artificial intelligence). Izay ve ??
rhaj0 - 05/04/2016 13:15
na hoe, no-programmer-ndRaolona hahay hi-programmer koa i Ra-Tay..
Ka raha hozy i Hery hoe, asory ny pile dia maty Ra-Tay... hi hi hi... raha robot manana tanana izy, mety mahay miaro-tena an....
5laody - 05/04/2016 16:43
Ianao ve tsy mbola nisy nampiesona amin'ilay tsaty mamaly ho azy e? tairo RaHery a, afaka firy minitra vao fantatra hoe tsy olona io miresaka io.
rhaj0 - 06/04/2016 15:06
Ny fahazoako ny tsaty mamaly ho azy, dia TSY ilay robot mahay "mianatra", fa ilay robot mahay "miboloky" fotsiny... asa anefa..
Fa kritika iray @ ity raharaha Tay ity hono, dia hoe... Ka sipakely i Tay. Dia nefany ny mpitokona eto @ tokotanibe, indrindra ireo miasa @ teknolozia interinety, dia bandy daholo. Ary maromaro ihany ny bandy frustré. Ka dia kingabe ry frustrés isany nampa-"ratsy taiza" an'i Tay.
Io izany dia seho isehoan'ny hoe, hatraiza no mbola voan'ny préjudice ny vehivavy. Ny taona @ io efa 2016, ary ny jeogirafia mba hoe aty @ tany mandroso, fa esy eee... tena mbola mila miady mafy ho an'ny anabavikely sy ny zanakavavy izany eee...
5laody - 07/04/2016 18:52
Tsy fantatro raha mahatsikaritra nareo hoe rehefa misy ankizy tsy mahay teny gasy ireny di a mba ampiarahina amin'ny boay kely eo mba hianatra fitenin-drazana dia jerenao afaka roa andro: Teny ratsy aloha no hay mialoha. Ka mety mitovitovy amin'izay ihany io angamba.
rhaj0 - 08/04/2016 14:47
Ka ny obsession sa ny frustration an'ireo boay be mpilalao interinety izany no nivoaka avy t@ io "Tay ratsy taiza" io eee... dia resaka sexist, racist, nazist no nitaizany an'i Tay.
Dia hita taratra @ io ho'a ny hadalan'ny boay be e... Ny taona @ io efa 2016, ary ny jeogirafia mba hoe aty @ tany mandroso, fa esy eee... tena mbola mila miady mafy ho an'ny anabavikely sy ny zanakavavy izany eee...